लकडाउनमा पनि फुर्सद छैन कुलमानललाई, उनी भन्छ्न खाने पनि टुंगो छैन बस्ने पनि टुंगो छैन…हेर्नुहोस ।
काठमाडौं । कुलमान घिसिङले सारा मुलुक झलमल्ल बनाएका छन् । यसका लागि उनले घामको उज्यालो त्यागेका छन् । अर्थात उनको ज्यानमा घामको न्यानो पर्दैन । किनभने, दिनभर उनी कार्यलय/कार्यक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन् । घाम ताप्ने फुर्सद हुँदैन । यही का,रण उनको शरीरमा ‘भिटामिन डी’को कमी छ ।
अन्तर्वार्तामा कुलमानले सुनाएका थिए, ‘कहिलेकाहीँ चि,कित्सकले भिटामिन डीको औ,षधी सेवन गर्नुपर्छ भन्छन् । अरु त खास स,मस्या छैन ।’
कुलमानको दैनिकी कसरी बित्छ ? खाने–पिउने तालिका के छ ? कुनबेला उठ्छन्, कुनबेला सुत्छन् ? ध,पेडी र द,बावबीच गु,ज्रने दैनिकीबीच आफूलाई कसरी ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्छन् ?
उनिसँगको कुराकानीमा कुलमान भन्छन्, ‘कामको चा,पले गर्दा धेरैजसो समय कार्यलयमा बित्छ । घुम्ने, रमाइलो गर्ने, भोज भतेरमा जाने फुर्सद बिरलै मिल्छ ।’
दिनभरको कामको ध,पेडी, थकानसँगै उनी ओछ्यानमा घुस्रन्छन् । गहिरो निद्रा पर्छ ।